पर्वत–बाग्लुङ सडक अवरुद्ध AahaKhabar
काठमाडाैं उपत्यकामा आज कहाँ कति नयाँ संक्रमित थपिए ?
आज देशभर ३ हजार ५ सय १७ संक्रमित थपिए, कति भए काेराेनामुक्त ?
प्रचण्डलाई भेट्न ओली निकट नेताहरु किन खुमलटार पुगिरहे छन् ?
पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन देउवाले बोलाए शीर्ष नेताहरूको बैठक
कोजाग्रत पूर्णिमा: दसैंको बिदाइ र तिहारको स्वागत गरिँदै आज
पर्वत । भारी वर्षाका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत– बाग्लुङ सडक पुनः अवरुद्ध भएको छ । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका– १ सहस्रधारामा निरन्तर पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएपछि दैनिक सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
गत मङ्गलबार रातिदेखि अवरुद्ध भएको सडक बुधबार दिउँसो ४ बजेपछि एकतर्फी चलेपनि रातिदेखि पुनः अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरिक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । वर्षा नरोकिएकाले पहिरो खुलाउन सकिएको छैन ।
सामान्य वर्षा हुने वित्तिकै पहिरो ठूलो भएकाले ढुङ्गा र लेदो बगेर आउँछ । वर्षा हुँदा स्काभेटर प्रयोग गरेर हटाउन समेत कठिन भएकाले २० घण्टादेखि बाटो अवरुद्ध बनिरहेको उनले बताए । पाङ जोड्न सहस्रधारा – पाङ सडक निर्माण गरिएपछि सहस्रधाराका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा यातायातका साधन घण्टौ रोकिने गरेका छन । अहिले लामो दुरीका सवारी साधन खुलेपछि यात्रुको चाप बढेपनि अवरुद्ध हुँदा त्यसले यातयात ब्यवसायी र यात्रु प्रभावित हुन पुगेका छन ।
सडक खुलाउन स्काभेटर तयारी अवस्थामा छ । दैनिक चारपाँच घण्टा स्काभेटर चलाएर सडक खुलाउँदा सडक निर्माणको जिम्मा लिएको लामा कन्ट्रक्सनले पनि थप आर्थिक भार बेहोर्न बाध्य छ । लामा कन्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्द भुसालका अनुसार डोजर परिचालनमा दैनिक पाँच हजार खर्च भैरहेको छ भने सडकमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम पनि गर्न कठिन भएको छ ।
भएका स्काभेटर त्यही पहिरो हटाउन प्रयोग हुँदा अन्य काम पनि प्रभावित हुँदै आएको भुसाल बताउँछन् । मुख्य राजमार्गबाट जथाभावी रुपमा शाखा सडकहरु निर्माण हुँदा जताततै राजमार्ग ध्वस्त बनाउने काम भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख आशिष थापा मगर बताउँछन्
काठमाडौंको धापासीमा छुरा प्रहार गरी एक युवकको हत्या
दसैंपछिको दोस्रो दिन पनि घट्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
दशैंलगत्तै दाेब्बर बढ्याे तरकारीकाे मूल्य
काेराेना संक्रमणबाट चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत दुई जनाको मृत्यु
आईपीएल : चेन्नईले कोलकातालाई ६ विकेटले हरायो
पत्रकारलाई अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह : निरन्तर सुझाव र आलोचना दिनुस’